Yangon | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Yangon ရှိ မှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ
Legal Manager - Male / Female (1 Post)
ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ 1 ပတ်
Curriculum Development Expert (Legal) - (IDLO)
Legal Aid Manager ( British Council )
The job involves some travel to programme locations in Myanmar.
Legal Officer ( BDM )
The Legal Officer will work within the Legal Unit of the BDM.
Policy analysis and engagement to support SME business development services (ILO)
The consultancy is expected to require 90 working days from November 2020 to April 2021.
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။